Nge-7 kaNovemba, i-Samsung ibhengeza iselfowuni yayo ngokuskena | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Iselfowuni esongelayo yefowuni eya kubhengezwa nge-7 kaNovemba
Izikrini ezisongelayo ziya kuqala ukuthatha ukubonga ngakumbi kwisibhengezo, i ngoNovemba 7 ozayo, kwiselfowuni yeSamsung eya kuthi ibonakaliswe ziifomathi ezimbini zesikrini kwenye.
Sitsho kuba zimbini zithetha ukuba ukusonga kwescreen kweSamsung kuya kuba nakho Iphaneli ephambili ye-7,3-intshi Super AMOLED iphaneli ephambili kunye nenye yesibini ngo 4,6 intshi. Kuxhomekeke kwinto esiyifunayo, sinokuyiguqula ibe yenye okanye ubungakanani kwenye.
Iya kuba kwi INkomfa yonjiniyela yeSamsung eSan Francisco apho le mobile inomdla kunye nesikrini esongelayo iya kuziswa. Singayisebenzisa ngokungathi yithebhulethi, kuloo fomathi 7,3,, kunye neselfowuni enescreen esingagqithiyo kwii-intshi ze-4,6 kwaye inokuba ncinane xa siqhelisela kwezinye ezidlula ii-intshi ezi-5,5, XNUMX.
Isiboniso seSamsung ngumthengisi wezikrini ezibini ekulindeleke ukuba ziqale ukuvelisa kule nyanga. Ezinye iiyunithi ezingama-100.000 ngenyanga ziya kuveliswa, ngelixa kulindelwe ukuba ziya kufikelela ukuvelisa phakathi kweeyunithi ezingama-500.000 ukuya kwisigidi esinye ngonyaka. Inkampani yaseKorea sele iceba ukuthengisa inani eliqingqiweyo kwezi ntlobo zezixhobo eziya kuthi zahluke zodwa.
Isixhobo esinokusongwa kwiscreen sayo (akukho mifanekiso yeyakwaSamsung), kubandakanya olunye uhlobo lwamava kunye nezigaba zovavanyo. Ukuze ndi iqeshe i-KH Vatec, ethathe unonophelo lokuqinisekisa ukunganyangeki kwesixhobo esihlala sifumaneka sisongelwe kunye nezikrini zaso ezimbini.
Iya kuba lusuku olulandelayo xa sisazi yonke into malunga nale smartphone inomdla kunye nokusonga okuya kuhamba kunye nayo kwifowuni yohlobo lweqokobhe, eza kubhengezwa eSan Francisco. Siza kubona ukufika kwesixhobo kuchaphazela njani Yahluke kakhulu ekumitheni, nangona kungaziwa njengegama URouyu sele emisele enye yezo mpawu.
Omnye Isamsung isajonge kwikamva lokulawula Okwangoku ngenani lezixhobo kunye neetekhnoloji, ezinje nge i-Galaxy S10 kunye nayo isivamvo esikrinini, okanye abanye ubuchwepheshe obungayi kukushiya ungakhathali Akukho mntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Iselfowuni esongelayo yefowuni eya kubhengezwa nge-7 kaNovemba
Iimpawu zeLapBook Pro, into entsha ephathekayo ye-Chuwi
Belle Launcher, Isiqalisi esahluke kakhulu kwi-Android yakho